Farmaajo: “Uma Sharraxni Madaxtinimada Soomaaliya”. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Farmaajo: “Uma Sharraxni Madaxtinimada Soomaaliya”.
Farmaajo: “Uma Sharraxni Madaxtinimada Soomaaliya”.
Raysal Wasaaraha Dawladda KMG ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ka hadlay xilliga kala guurka iyo qaabka ay u dhacaayaan doorashooyinka soo aadan.
Farmaajo ayaa mar uu waraysi siinaayey Idaacadda Codka Maraykanka ee VOA-da isaga oo kusugan Imaaraadka Carabta, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga baxo wakhtiga KMG ah isla markaana ay dhacaan doorashooyin wakhtiga ay dhici doonaan la’isla qaatay, iyadoo la raacaayo soo jeedinta beesha caalamka kadib shirkii uu kaga soo qayb galay magaalada New Yorka ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay.
Waxa uu intaasi ku daray in beesha caalamku mar kasta kasoo horjeeddo muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen Baarlamaanka KMG ah, iyadoo beesha caalamku soo jeedisay in wakhtiga Dawladda KMG ah lagu daro sanad si loo cayimo wakhtiga doorashadu dhacayso, loona dhameeyo hawlaha adag ee hadda u yaalla Dawladda.
Mar wax laga waydiiyey guux maal mahan soo baxaayey kaasi oo ku aadanaa in Farmaajo u sharaxan yahay xilka madaxtinimada Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in uusan hadda musharax ahayn isaga oo intaasi ku daray in uu soo dhowaynaayo ciddii u sharaxan jagadaasi.
Raysal wasaaraha ayaa sidoo kale ka hadlay doorka ay Dawladda Ethiopia ku yeelan doonto doorashada soo socota, waxaana uu tilmaamay in Ethiopia ay tahay dal deris ah doorashadana ay u madax banaan yihiin umadda Soomaaliyeed.
Maxamed Cabdulaahi Maxamed (Farmaajo) oo xilligan dalka dibadda uga maqan ayaa kasoo qayb galay kulamdii Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya.